नेपालमा एसिड आक्रमणकारीलाइ मत्युदण्डको सजाय ! - Maxon Khabar
Home / News / नेपालमा एसिड आक्रमणकारीलाइ मत्युदण्डको सजाय !
नेपालमा एसिड आक्रमणकारीलाइ मत्युदण्डको सजाय !
वीरगन्जकी १५ वर्षीया किशोरी मुस्कान खातुनमाथिको एसिड आक्रमणपछि संसदमा कानुन परिमार्जनको बहसले प्रवेश पाएको छ । कतिपय सांसदले संविधानले बर्जित गरेको मृत्युदण्डको कानुन माग गरेका छन् भने कतिपयले फितलो कानुनको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदहरुले एसिड आक्रमण गर्नेमाथिको कारवाही गर्ने कानुन फितलो भएको बताए ।
उनीहरुले पटक पटक किशोरी र युवतीहरु एसिड आक्रमणको शिकार हुने गरेकाले कडा कानुन र बिक्री वितरणमा समेत लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । कतिपय सांसदले संविधानले निषेध गरेको मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । कांग्रेस नेतृ उमा अधिकारीले संसारका व्भिन्न देशमा मृत्युदण्डको कानुन रहेको दृष्टान्त दिदै कानुनमा संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विशेष समयमा बोल्दै उनले भनिन् ‘सरकार किन मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन ल्याउँदैन, किन टुलुटुल हेरेर बसेको छ ? फितलो कानुन देखाएर अपराधी छुट्ने अवस्था छ । म जोडदार रुपमा माग गर्छु, कानुनमा संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियोस् ।
सांसदहरुले मृत्युदण्डको कानुन माग गरेपनि सरकारले सो कानुन ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि संविधानमै संशोधन गरेर मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माणकै बेला यसबारेमा ब्यापक बहस भएको थियो । भदौ २० गते शुक्रबार बिहान विद्यालय जादै गर्दा वीरगञ्ज छपकैयाकी १५ बर्षिया मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । उनको अहिले काठमाडौको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले एसिड आक्रमणका दोषीलाई जन्मकैद वा फाँसीको सजाय दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिले अत्यन्तै घृणित अपराध गरेको छ । मुस्कानको जिन्दगी नै बरबाद गर्ने अपराध गरेको छ ।
यस्तो दोषी कुनै पनि बाहनामा उम्किनु हुँदैन । कानुन संशोधन गरेर भए पनि एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद वा फाँसीको सजाया दिनुपर्छ’ उनले भने । एसिड आक्रमणमा परेकी किशोरीले यसको पीडा बाँचुन्जेल भोग्नुपर्ने भएकाले आक्रमणमा संलग्नलाई पनि बाचुन्जेल जेलमा राख्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ छ । उनले एसिड किनबेचमा पनि कडाइ गर्न माग गरेका छन् । ‘नागरिकता राखेर वा परिचय पत्र राखेर मात्र एसिड देओस्’ सांसद यादवले भने । ‘नेपाल सरकारले पैसाको व्यवस्था गरेर वा अस्पतालमा पत्र लेखेर मुस्कानको इलाजको जिम्मा लेओस्’ सांसद यादवले भने । सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले कहिलेसम्म बालिकाले असुरक्षित जीवन जीउन बाध्य हुने भन्दै कानुन संसोधन गरेर भए पनि एसिड आक्रमण गर्ने दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद जुलीकुमारी महतोले एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गरी महिलाको सुरक्षाका लागि कडा कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद महतोले महिलाको सुरक्षाका लागि थप संवेदनशील बन्दै दोषीलाई पक्राउ गरि कडा कारवाही गर्न पनि माग गर्नुभयो । ‘प्रदेश २ मा छोरीमाथि एसिड आक्रमणका घटना धेरै पटक भएकाले रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छ । प्रदेश २ को सरकारले बेटी बढाउ बेटी जोगाउ अभियान जोडतोडले लागु गरेको छ । बेटी नै बाँचेनन् भने अभियानको औचित्य हुने छैन’ उनले भनिन् । सांसद नरमाया ढकालले एसिड आक्रमणको घटनाको भत्र्सना गर्दै दोषीलाई नियन्त्रणमा लिई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न माग गरिन् । सांसद पार्वता डिसी चौधरी मुस्कान खातुनको उपचार खर्च व्यहोर्न र दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद पार्वती कुमारी विशुंखे, प्रमिला राईलगायत सांसदहरुले एसिड आक्रमणको घटनाको भर्त्सना गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।